[Ukara] dr.fone Toolkit - Android Data ndabere & Weghachi: bibiri Exaport na Weghachi
dr.fone Toolkit - Android Data ndabere & Weghachi
Flexibly ndabere na weghachite gam akporo Data
Bibiri ndị ndabere gam akporo data na kọmputa na otu click.
Preview ma weghachite ndabere ọ bụla gam akporo ngwaọrụ.
Akwado 8000+ gam akporo ngwaọrụ.
Na dr.fone Toolkit - Android Data ndabere & Weghachi, inye nkwado na iweghachi gị gam akporo data dịtụbeghị eaiser.
dr.fone Toolkit - Android Data ndabere & Weghachi enye gị ohere mfe ndabere fọrọ nke nta niile ụdị data gụnyere kalenda, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, gallery, video, ozi, kọntaktị, audio, ngwa na ọbụna ngwa data (n'ihi na gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ). I nwekwara ike ịhụchalụ na bibiri mbupụ ụdị ọ bụla nke data na ị chọrọ. Ihe omume na-enye gị ohere mfe weghachi data ngwaọrụ gị mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Ndabere gị gam akporo na One Click
dr.fone Toolkit - Android Data ndabere & Weghachi-enye gị ohere ndabere data na kọmputa na nanị otu click enweghị overwriting ọ bụla ẹdude data. Ihe omume na-enye gị pụrụ iche ike na-ele ihe na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na họrọ ihe niile ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị na ị chọrọ iji weghachi.
Ndụ gị dị mfe
Jiri a gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite ngwá ọrụ, ị nwere ike ịmepụta a zuru ndabere nke niile data na ngwaọrụ gị si otú idebe data ala.
Ndabere faịlụ agaghị anọchi
Ị nwere ike ime ka a ndabere n'oge ọ bụla ị chọrọ ma na niile ndabere faịlụ ndị ala, na-apụghị ọhụrụ n'ụzọ ọ bụla mgbe ị na-eme a gam akporo ndabere.
Easily ele gam akporo ndabere ọdịnaya na weghachi data bibiri
Nke a gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite software-enye gị ohere ịhụchalụ nkọwa nke niile ndabere faịlụ ma họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na ngwaọrụ.
Ndabere gị ngwa ọdịnala na ngwa data
Ị nwere ike iji nke a gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite ndabere gị ngwa ọdịnala na ngwa data (n'ihi na gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ).
Ndabere android data na lossless quality
Na nke a gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite omume, i nwere ike ijide n'aka na ị ga-mgbe ida ọ bụla nke data na ngwaọrụ gị.
9 faịlụ na ụdị na-akwado
The gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite software nwere ike iji na nkwado ndabere na mpaghara weghachite kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, calendar, gallery, audio, video, ngwa na ọbụna ngwa data (ọ bụ ezie na nanị maka gbanye mgbọrọgwụ ngwaọrụ)
8000+ na ngwaọrụ na-akwado
Ọ na-akwado kasị ewu ewu na gam akporo ngwaọrụ gụnyere Samsung, Sony, LG na ruo 8000 ọzọ ụdị. The ndepụta na-eto eto ka Ohere inweta bụ na ngwaọrụ gị na-akwado. Lelee ọzọ >>
Nke a gam akporo nkwado ndabere na mpaghara weghachite na omume na-kpam kpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Weghachi Data si ndabere Files
Ma ihe ndị ndabere faịlụ, ị nwere ike ịhụchalụ na họrọ data na ị chọrọ iji weghachi. Ọzọkwa, ị nwekwara ike weghachi ndabere data nke na ngwaọrụ ọzọ ngwaọrụ gị.
Ndabere na weghachite data gị gam akporo ngwaọrụ mfe.
Gam akporo Data ndabere & Weghachi Works maka Kasị gam akporo Ngwaọrụ
Ngwa data (n'ihi na gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ)
Gam akporo data nkwado ndabere na mpaghara weghachite dị nnọọ ezi ngwaahịa masịrị m bụ a ọtụtụ ka ike gwara m ebe m na-ekele ndị amamihe onye nwere inception nke gị na ndị niile na-ekele na ekele.
Arụ ọrụ dị ukwuu!
Nke a na usoro ka m na-azọpụta a otutu nnukwu-echeta!
Ọ bụ otú helpfull m ndabere m gam akporo data.
Samsung Auto ndabere
Best Android ndabere extractor na ndabere Ngwọta
Samsung Account ndabere: Ihe Ị Mkpa Ịmata
Top 12 Best gam akporo ndabere Apps 2016
Top 10 Samsung Cloud ndabere Services
Full Guide to Weghachi gam akporo ekwentị
5 Ụzọ ndabere gam akporo App na App Data Easily
5 Ụzọ ndabere gam akporo na PC Easily
Top 9 kasị bara uru Samsung ndabere Softwares